Kedu ihe bụ glacier, olee otu esi kpụọ ya na ụdị glaciers | Network Meteorology
Glaciers bụ igwe gbara ọkpụrụkpụ nke mejupụtara ọtụtụ puku afọ. Ihu igwe na-aga n’ihu na okpuru ọkụ na-aga n’ihu na-erughị ogo 0 na-eme ka snow gbakọtara n’otu ebe, na-eme ka ọ gbanwee ka ọ ghọọ ice. Glaciers bụ ihe ndị kachasị ibu na mbara ụwa anyị n'agbanyeghị na ha dị ka edoziri anya, ha na-agagharị. Ha nwere ike jiri nwayọ na-asọ dị ka osimiri wee gafere n'etiti ugwu na -emepụta crevasses na glacial relief. Ha nwekwara ike ịmepụta okwute na ọdọ mmiri.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara glaciers, mmalite ha na njirimara ha.
1 Gịnị bụ glasia
3 Akụkụ nke glacier
4 Ofdị glacier dị adị
Gịnị bụ glasia
A na-ewere glacier dị ka ndị fọdụrụ na ndị ikpeazụ Ice afọ. N'oge a, obere okpomọkụ na-eme ka ice ahụ kwaga n'akụkụ ala latitudes ebe ihu igwe dị ugbu a dị ọkụ. Ka ọ dị ugbu a, anyị nwere ike ịchọta ụdị mmiri dị iche iche dị n'ugwu nke kọntinent niile belụsọ Australia na ụfọdụ agwaetiti oke osimiri. N'etiti latitude 35 Celsius n'ebe ugwu na 35 Celsius ndịda glaciers nwere ike na-ahụ na ugwu Rocky, na Andes, na Himalayas, na New Guinea, Mexico, East Africa na Ugwu Zard Kuh (Iran).
Ha bụ oke elu nke glaciers nwere nke dị ihe dịka mejuputara 10% nke elu ala dum. Ha na-apụtakarị na mpaghara ugwu dị elu n'ihi na ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị ya mma. Nke ahụ bụ, enwere obere okpomọkụ na oke mmiri ozuzo. Anyị maara na e nwere ụdị mmiri ozuzo nke amara aha ugwu, nke na-eme mgbe ikuku na-ebili elu na-agwụ ma na-ekpuchi ma mmiri ozuzo na-ada n'elu ugwu. Ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ dị n'okpuru ogo 0 na-aga n'ihu, mmiri ndị a ga-adị n'ụdị snow ma ha ga-akwụsị nkwụnye ego ruo mgbe ha ga-etolite glaciers.
A na-enye glaciers na-egosi na ugwu dị elu na mpaghara polar aha dị iche iche. A na-akpọ ndị na-apụta n'ugwu ndị dị elu ugwu alpine glaciers mgbe glaciers na poolu mara dị ka ice okpu. N'oge a na-ekpo ọkụ, ụfọdụ na-ahapụ mmiri gbazee n'ihi agbaze ya, na-eke mmiri dị mkpa maka anụmanụ na ahịhịa. Na mgbakwunye, ọ bara ezigbo uru maka ụmụ mmadụ ebe ọ bụ na mmiri a na-eji mmadụ eweta. Ọ bụ ọdọ mmiri kachasị ukwuu nke dị na mbara ala, nwere ihe ruru ụzọ atọ n'ụzọ anọ.
Ka anyị hụ ihe bụ isi usoro nke na-ewere ọnọdụ maka nguzobe glacier. Ọ mejupụtara na-adịgide adịgide nke snow n'otu mpaghara ahụ n'afọ. Ọ bụrụ na ebe nwere anọgide ala okpomọkụ a na-echekwa snow ruo mgbe akpụ ice. N’ime ikuku, ihe omimi mmiri niile na-arapara n’obere uzuzu wee mebe kristal. Ọ bụ mgbe ahụ ka ụmụ irighiri mmiri ndị ọzọ na-arapara na kristal ndị e guzobere na ụdị snowflakes anyị ji ahụkarị.
Snowflakes dara n'akụkụ nke ugwu kachasị elu ma na-echekwa ya oge mgbe snow na-aga n'ihu. Mgbe ezuru snow zuru ezu, akụkụ ice na-amalite etolite. Kwa afọ, arọ nke oyi ọhụrụ nke snow nke na-agbakọkọtakọ usoro nke ice karị ma mee ka snow na-etikwa mkpu ọzọ ebe ikuku dị n'etiti kristal ahụ na-ebelata. Oge ọ bụla kristal buru ibu na snow jupụtara na-abawanye njupụta ya. Isi ihe ụfọdụ dabara na nrụgide nke ice wee malite ịmịda ala na ha na-etolite a ụdị osimiri na na njedebe nke ọ bụla a U-yiri enyemaka.
Akụkụ nke glacier site na usoro okike na-eweta ahụ efe a maara dị ka enyemaka ice. Ọ makwaara dị ka glacier ịme ngosi uwe. Ice n’ebido ịmalite rue n’otu akara na nke n'elu akara na ị na-enweta ihe uka karịa ị hapụ ma n'okpuru na ị ghara ida karịa i merie. Usoro a na - ewekarị ihe karịrị otu narị afọ tupu o mee.
Ofdị glacier dị adị
Enwere ike ịkọwa glacier n'ọtụtụ ụzọ, ọ bụ ezie na ọ dabere na ịme ngosi uwe ya na nhazi ya. Ka anyị lee ihe dị iche iche dị adị:
Alcine glacier: A makwaara ya site na aha nke glacier ugwu ma ọ bụ ndị na-emepụta ugwu dị elu site na nchịkọta nke snow.
Circus glacier: ọ bụ bezin dị ka mpekere mpekere ebe mmiri na-achịkọta obere obere.
Ọdọ mmiri Glacial: ha bu mmiri mmiri nke putara na ndagwurugwu nke ndagwurugwu ma nwee oge mgbe oyi na ndi ozo mgbe ha adighi.
Ndagwurugwu glacier: nsonaazụ a nke nsị nke asụsụ glacial. Ọ na-enwekarị ndagwurugwu yiri U ma na-emepụta okwute elongated.
Inlandis: ha bụ nnukwu mmiri ice na-ekpuchi ala niile wee mechaa gafere n'oké osimiri.
Egwuru egwu: ha bụ mounds nke a kpụrụ site na sedimentary ihe nke glacier dọkpụụrụ yana ya ije.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere glacier na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Kedu ihe bụ glacier na otu esi aha ya